TAARIIKH: Haweynaydii ugu horreysay ee Garsoore ka noqotay kulan ka mid ah 5-ta horyaal ee ugu sarreya Yurub – Gool FM
TAARIIKH: Haweynaydii ugu horreysay ee Garsoore ka noqotay kulan ka mid ah 5-ta horyaal ee ugu sarreya Yurub
(Germany) 11 Sebt 2017. Bibiana Steinhaus ayaa taariikh wayn sameysay kaddib markii ay noqotay hawayneydii ugu horreysay ee Gasoore ka noqota kulan ka tirsan 5-ta horyaal ee ugu sarreysa Yurub, La Liga, Premier League, Serie A, Ligue 1 iyo Bundesliga.
38-jirta ah Sarkaal Bilays ayaa dhex dhexaadiye ka noqotay kulan dhex maray kooxaha Hertha Berlin iyo Werder Bremen oo ku idlaaday bar –baro 1-1 .
Kulanka ayaa ku dhamaaday si nabad ah iyadoo Garsoore Steinhaus ay u baahatay inay kaarka jaalaha u taagto hal laacib oo qura kaa oo ah xiddiga qadka dhexe ee Hertha Berlin Per Skjelbred.
Laacibka Bayern Munich Franck Ribery ayaa durba Twitter ka ugu soo hambalyeeyay Garsoore Steinhaus oo taariikh wayn sameysay sidoo kale waxaa fariin taageero ah u soo diray goolhayihii hore ee Real Madrid Iker Casillas.
Bibiana Steinhaus ayaa dhex dhexaadiya ka ahayd heerka labaad ee horyaalka Jarmalka tan iyo 2007 waxay sidoo kale garsoore ka ahayd koobka adduunka iyo Finalka Champions League ee haweenka.
Waxaa iminka lagu soo daray Gasoorayaasha Rasmiga ee dhex dhexaadin doona horyaalka Bundesliga ee kal ciyaareedka 2017-18, kulanka Hertha Berlin iyo Werder Bremen ayaana noqday kulankii ugu horreeyay ay qabato.
EL CLASICO: Real Madrid iyo Barcelona oo la daawan doono waqti Galab ah